कोभिड खोपः कुन देशका बालबालिकालाई कस्तो खोप दिइँदैछ ? - Pokhara News
होमपेज-अन्तर्राष्ट्रिय-कोभिड खोपः कुन देशका बालबालिकालाई कस्तो खोप दिइँदैछ ?
कोभिड खोपः कुन देशका बालबालिकालाई कस्तो खोप दिइँदैछ ?
पाेखरा न्यूज । १८ वर्षमाथिका आफ्ना अधिकांश नागरिकलाई खोप लगाएका विभिन्न देशले बालबालिकालाइ पनि खोप अभियान सुरु गरिसकेका छन् । अमेरिकामा ६ महिनादेखि नै बालबालिकामा खोप लगाउन थालिएको थियो भने वेलायतले अब सुरु गर्दैछ ।
प्रमूख स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सल्लाहपछि बेलायतका १२ देखि १५ वर्षका बालबालिकाले फाइजरको एक डोज लगाउने भएका हुन् । खोप विकासमा नयाँ फड्को मारेको चीनले तीन वर्षदेखि १८ वर्ष समूहका व्यक्तिलाई लक्षित गरी खोप तयार गरेको छ ।
के हुँदैछ युरोपमा ?
युरोपको मेडिकल निकाय इएमएले यही मेमा १२ देखि १५ वर्षका बालबालिकालाई फाइजरको खोप अनुमति दिएपछि युरोपेली देशका बालबालिकामा खोप अभियान जारी छ । डेनमार्क र स्पेनका अधिकांश बालबालिकाले खोप लगाइसकेका छन् ।
फ्रान्समा १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६६ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाएका छन् भने ५२ प्रतिशतले पूर्णखोप लगाएका छन् । अक्टोबरसम्म १२ देखि १८ वर्षसम्मका सबैलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
जर्मनीका स्वास्थ्य विज्ञले जुनमा १२ देखि १५ वर्षका बालबालिकालाई खोप लगाउन सुझाएका थिए । स्वीडेन र नर्वेमा पनि बालबालिकामा खोप अभियान सुरु गरिएको छ । मेमा अमेरिका र क्यानडाले १२ वर्षमाथिका बालबालिकालाई फाइजर दिन सकिने जनाएको थियो । अमेरिकामा कतिपय बालबालिकालाई पहिलो डोज फाइजर र दोस्रो डोज मोडेर्ना दिईएको छ । डेल्टा भेरिअन्ट फैलिएसँगै अमेरिकाले खोप अभियान तीब्र पारेको छ ।
चीनमा तीन वर्षमाथिकाले लगाउन सक्ने
चीनले तीनदेखि १७ वर्षका बालबालिकालाई सिनोभ्याक लगाउन अनुमति दिएको छ । चीनमा कोभिड खोप अनिवार्य बनाइएको छ । पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिका सन्तान मात्र विद्यालय जान पाउँछन् ।
त्यस्तै, चिली सरकारले ६ देखि १७ वर्षका बालबालिकालाइ खोप लगाउन अनुमति दिएको छ । तर, खोप कार्यक्रम सुरु भएको छैन् । कोरोनाबाट प्रभावित भारतमा यही अगस्टमा स्थानीय औषधी कम्पनीले तयार पारेको खोपले १२ वर्षमाथि किशोर किशोरीका लागि अनुमति पाएको छ ।